India: Pakistan waxay dooneysaa inay si cad u bar-tilmaameedsato India iyo UN-ka, oo ay ku yar yihiin kuwa qaata | Wararka Hindiya - TELES RELAY
ACCUEIL » International India: Pakistan waxay dooneysaa inay si cad u bar-tilmaameedsato India iyo UN-ka, oo ay ku yar yihiin kuwa qaata | Wararka Hindiya
DELHI CUSUB: Inkasta oo Pakistan ay raadineysay warqad loogu talagalay shir deg deg ah Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee ku saabsan arrimaha J&K, dadaalladii ugu dambeeyay ee ay ka geynayeen arrimaha gudaha ma aysan u muuqan inay si xoog leh ku gaareen Golaha. Xaqiiqda ah in Islamabad ay ku baaqday shir degdeg ah "rasmi" oo leh xaq u leh inay soo bandhigaan aragtideeda iyo xitaa in la duubo daqiiqadaha kulanka ayaa laga helay xubno yar oo ka tirsan Golaha, waad baratay.
Xaqiiqdii, Goluhu kama uusan soo qeybgalin kulanka noocan ah tobanaan sano.
Dhibaatooyinka Pakistan ee Golaha ayaa sii xumaaday iyo Russia Waxay ku celisay taageeradeeda Hindiya, iyadoo sheegtay in aysan jirin wax kale oo aan ahayn oo aan ahayn in lagu xalliyo khilaafaadka u dhexeeya Hindiya iyo Pakistan iyada oo loo marayo qaab siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed. Wasiirka arrimaha dibedda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa farriintaan gaarsiiyay dhiggiisa Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, markii uu taleefoonka kula hadlayey waxyar ka dib markii uu warqad cusub u qoray Golaha Amniga oo ugu yeeray kulan Golaha Amniga. qunyar socodnimada, isagoo sheegaya in qunyar socodsiinta Pakistan aysan ahayn in lagu khaldo itaal darrida Hindiya. .
"Wakiiladda Ruushka ee Qaramada Midoobay waxay u hoggaansamaan mowqifkan wadaagga ah," Moscow ayaa sidaas ka sheegtay wadahadalka ka dib, markii ay codsatay Islamabad.
Ruushka kaliya xubin rasmi ah kama ahan Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, laakiin wuxuu sidoo kale u shaqeyn doonaa Madaxweynaha Golaha bisha soo socota. Moscow waxay si furan uga furan tahay taageeradeeda Hindiya marka loo eego waddankasta oo ku yaal P-5. Bayaan hore oo ah kii Agoosto 9, wuxuu cadeeyay in kala noqoshada maqaamka gaarka ah ee J&K iyo dib u habeyntiisaba ay qeyb ka ahaayeen dastuurka Hindiya. Faransiiska, xubin kale oo joogto ah, ayaa ka aamustay arrinta illaa iyo hadda.
Waraaqdiisii ​​saddexaad ee uu u diray Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay toddobaadyadii la soo dhaafay, Qureshi wuxuu codsaday kulan deg deg ah oo ku saabsan arrinta Kashmir iyaga oo sheegaya in ay jireen "warbixino la isku halleyn karo" in daraasiin dibadbaxayaal aan hubaysnayn ay "kufsadeen goobta". Bandowga arxan darrada ah "" waxaa lagu dilay toogasho aan kala sooc lahayn oo ay sameeyeen ciidamada amniga India.
Saraakiisha Hindiya waxay ku tilmaameen sheegashada Pakistan mid ah dacaayad ay sii hurinayaan macluumaad been abuur ah.
Muhiimad ahaan, Pakistan waxay u muuqatay inay ka ilaalinayso weerar argagixiso oo suurta gal ah oo lagu qaado J&K, iyadoo Qureshi uu ku xusay warqaddiisa waxa uu ugu yeedhay hawlgal khayaali ah oo ka hooseeya calanka Hindiya si looga xanaajiyo "xiisad cusub oo ka dhacda Pakistan". In kasta oo siyaasiyiinta Pakistan ay had iyo goor dadweynaha si cad uga hadlayeen hawlgal calan been abuur ah, Islamabad si rasmi ah ayey ugu soo bandhigtay Golaha Amniga.
Marka loo eego nooca Pakistan ee isweydaarsiga Ruushka, “suurtagalnimada calanka beenta ah” ee Hindiya waxaa sidoo kale Qureshi la qaaday Lavrov. Raiisel wasaaraha Pakistan Imran Khan Hindiya ayaa uga digtay usbuucii hore in noocyada cusub ee Pulwama ay dhici karaan iyada oo ay sabab u tahay go'aanka Hindiya ee ah in laga laabto maqaamka gaarka ah ee J&K.
Maamulka Hindiya ayaa ku tilmaamay sheegashada Qureshi mid isku day cusub ah oo Pakistan ay ku soo bandhigeyso sawirka naxdinta leh ee ka dhexeeya xiriirka labada dal iyo ka xanaajinta faragelinta awoodaha waaweyn.
Waraaq uu u diray Guddoomiyaha Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, Qureshi wuxuu ku sheegay Talaadadii in shir degdeg ah uu muhiim u yahay in la baaro xaaladda ka dhalatay "falalkii ugu dambeeyay ee gardarrada Hindiya" taasoo ay tiri. waxay khatar gelisay nabadda iyo nabadgelyada caalamiga ah. oo loola danleeyahay si keli keli ah ee loo beddelo qaab-dhismeedka tirakoobka ee dhulka, iyadoo lagu xadgudbay xuquuqda aasaasiga ah ee dadka reer Kashmiiri.